DOWNLOAD Agusta Westland EH101 v2 FSX & P3D - Rikoooo
Downloads 29 293
Munyori: Microsoft, v2 naDavid Robles
Download Kune FSX-Acc & FSX-Steam & P3D v1. * v2 v3 v4 kuongororwa #Native FSX uye / kana P3D #3D Virtual Cockpit
enderana chete FSX Yechipiri kana P3D. Complete neherikoputa kuti hakupesani pamwe default EH101 kubva FSX-Acc.
The EH101 ndomumwe yakanakisisa helicopters munyika, asi Microsoft haana kuisa zvikuru nesimba muna muenzaniso uyu uye zvaishaikwa zvizhinji. The neherikoputa yave reworked kuti sezvo pedyo sezvinobvira nyika chaiyo.
* Musakanganwa kuisa mafuta ari Matangi matatu
ortherwise neherikoputa kuda Nott atange *
No asingasviki 17 kuvandudzwa zvakagadziridzwa ichi kuwedzera-mberi. Heino zvawanyora:
1. Reworked ndege configuration ndege emuchina kudzikamisa injini kudirana anowanika pamwe default ndege.
2. Reworked mhepo faira kuti ndege mubato kupfuura zvazviri.
3. Added vaviri kumhara zviedza necheseri struts dzawanikwa Asian uye chimedu dzaishandisa ndege.
4. Added kupisa uye pedza migumisiro yose mitatu injini.
5. Added tichifungisisa strobes itsva kuti kaviri nokupenya kubvisa muviri ndege.
6. Added vaviri kushanda radars zvichaita chamber ndege. 1st ari Vatyairi radar yave club kuti ndege chete. 2nd ari Co-Vatyairi Radar rave club nokuda dzendege, nyika vakawanda nomunzvimbo dzine rakatevera, ndege, NDB vake, ulkopuolella vake, Airport ID
7. Added Radar anotonga vose hurongwa mukati VC.
8. Added nyore kuverenga MFD uye PFD sefa
9. Kukurudzirwa injini verenga gauges kuti yakaderera pamwero
10.Added Ngowani Mount Display (HMD kana HmountD) pamwe mbeva clickable haizoshandisi vane groundspeed kuti zvichaita kuverenga kunaka (kuzvishandura) kutiza uye useable timer.
11.Added maradio (Default Extra 300)
12.Added mifananidzo inokukurudzira kumusoro GPS
13.Added mifananidzo inokukurudzira kumusoro musuo kudzora geji, nokuti anokurumidza kuwana ndege.
14.Added mifananidzo inokukurudzira kumusoro chiedza chinja.
15.Added chinja-vakakwanisa Vocal pasi nepedyo yambiro hurongwa nemoto vakamuka, rotor pasi / mukuru vakamuka, pasi ngoro akasvinurira, kukwira akasvinurira
16.Added car-kuyengerera geji.
17.Added abuda radar kuzvidzora kuti pasi njanji hurongwa
Video pamusoro EH101 kuburikidza default kubva FSX Yechipiri:
Downloads: 16 002
Downloads: 5 128
Downloads: 9 472
Downloads: 23 999
Downloads: 7 805